Global Voices teny Malagasy » Rosia: Adim-bavy Ara-politika Manoloana Ny Pussy Riot · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Aogositra 2012 11:59 GMT 1	 · Mpanoratra Yulia Lukashina Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Rehefa nampiseho ny fanohanany ny Pussy Riot nandritra ny nanatontosany fampisehoana tany Rosia na ny Red Hot Chili Peppers na i Madonna, nisioka  [ru] i Ksenia Sobchak, olo-malaza amin'ny fahitalavitra sy vao niditra eo amin'ny sehatry ny politika ao amin'ny fanoherana:
Elena Vaenga  no mpihira pop malaza hita lohateny lehibe amin'ny gazety nanameloka an-tserasera ny Pussy Riot. (Raha te-hahalala bebe kokoa, vakio ato  ny fitantaranay momba azy ity.) Mpihira pop malaza ihany koa i Valeriya  (anaran'i Alla Perfilova rehefa mihira) ary misy mifangaro ihany koa amin'ny mozika Rosiana. Efa tsy lazaina intsony moa fa tsy misy artista mankasitraka ny laza iraisampirenena vao namangy ny Pussy Riot.
Nanoratra valinteny lava sy tsara rafitra  [ru] ao amin'ny LiveJournal i Valeriya, mampiseho fiainana ho “sipa tsara [taiza]”. Ao izy no miampanga an'i Sobchak ho mamadika ny fanafintohinana an'olo-tsotra ho fanafintohinana ara-politika sy ny fironany ao amin'ny televiziona mankany amin'ny hetsi-panoherana isan-karazany, mandresy lahatra fa ny ‘fitadiavan'i’ Sobchak ‘laza’ fatratra no mahatonga azy “hampihosina ny Tanindrazana ho ao anaty fotaka.” Nofaranan'i Valeriya fa tsy mahita filoha tsara mihoatra noho i Putin izy.
Namaly avy hatrany ny bilaogera rosiana. Mpisera LJ 0-logik, ohatra, nanomboka tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevitra  tao amin'ny bilaoginy, manontany ny mpamaky na hanohana ny “fiampangan'i ” Valeria na hanohana ny “ara-tsain'i ” Sobchak. (Tsy mahagaga raha i Sobchak no nitarika tamin'ny vato manakaiky ny 500.) Manontany ihany ny mpiserasera hafa, raha miresaka momba ny toe-draharaha politika misy eo amin'ny firenena ny mijoro miaraka amin'i Sobchak na mijoro miaraka amin'i Valeriya. Na eo aza izany, vao samy manana ny ampy izy roa roa ireo ka lavitra azy ireo ny zava-manahirana ny Rosiana isan'andro.
Manamarika kosa ny bilaogera Misliobovsem  [ru], etsy andanin'izany, fa azo ampiharina aminy ihany koa ny tsikeran'i Valeriya amin'i Sobchak:
Misy ireo Rosiana fanta-daza sasany, tahaka an'i Fillip Kirkorov, niandany tamin'i Ksenia  [ru], raha miandany amin'i Valeriya kosa ny hafa. Nahafinaritra ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena vetivety ity horakoraka tamin'ny Twitter ity, na dia tena niserana kely tokoa aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/26/37720/
 valinteny lava sy tsara rafitra: http://valeriya.livejournal.com/7587.html
 miaro an'i : http://cuamckuykot.ru/time-to-define-or-letter-from-valeria-to-sobchak-5647.html
 niandany tamin'i Ksenia: http://smirypo.blogspot.de/2012/08/blog-post_12.html